I-EasyJet ibaleka kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick kwiFizili yoQeqesho oluZinzileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-EasyJet ibaleka kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick kwiFizili yoQeqesho oluZinzileyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-EasyJet ibaleka kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick kwiFizili yoQeqesho oluZinzileyo.
Iinqwelomoya ezingama-42 ezilula ezisebenza kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick ziya kuxhotyiswa nge-30 yepesenti yeNeste MY Sustainable Aviation Fuel blend.
Ngethuba lokuqala ukuhamba ngenqwelomoya eGatwick kusebenzise ipetroli yendalo (SAF).
I-Q8Aviation ihambise unikezelo lokuqala lweNeste YAM.
Iqinisekisa ukuzibophelela okuqinileyo kwawo onke amaqela achaphazelekayo ekuphumezeni ukunciphisa i-carbon carbon emission kwi-petroli esetyenziswe kwi-aviation kunye nokusebenzela ukufikelela kwinjongo ephambili ye-aviation ukufikelela kwi-zero zero emissions ngo-2050.
Ukuqala kokuhamba namhlanje, zizonke iinqwelo-moya ezilula ezingama-42 ezisebenza ukusuka IWatwick Airport ziya kuxhotyiswa ngumxube we-30 wepesenti weNeste YOMZIMA we-Aviation Fuel ™. Eli phawu libalulekileyo liphawula okokuqala inqwelomoya ehamba eGatwick isebenzisa ipetroli yozinzo (SAF) kunye nokusetyenziswa kwayo nayiphi na inkonzo elula yeJet. Iqinisekisa ukuzibophelela okuqinileyo kwawo onke amaqela achaphazelekayo- umthengisi wezoQhushululu weQ8Aviation wamazwe aphesheya, elulaJet, Gatwick Airport Ltd kunye neNeste - ukufezekisa ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni kumafutha asetyenziswa kwindiza kunye nokusebenza kwinjongo ephambili yokuhamba ngenqwelomoya ukufikelela kwi-zero zero emissions ngo-2050.
Kwiinqwelo-moya ezingama-42 ezibaleka kwi-Neste MY Fineustustable Aviation blend, ezingama-39 kwezi ziya kuba zezi elulaJet Iinqwelomoya ezisebenza ukusuka eGatwick ukuya eGlasgow kuyo yonke iNkomfa ye-COP26 yoTshintsho lweMozulu, eqala nge-31 ka-Okthobha ukuya kwi-12 kaNovemba. Kuzo zonke iinqwelo-moya ezingama-42, ukukhutshwa kwegesi egcina umoya opholileyo kuya kuncitshiswa ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-70 ezibonisa ngakumbi iinjongo zeshishini lokunciphisa ukukhutshwa kwegesi engcolileyo kwikhosi yokufikelela kwi-zero zero emissions ngo-2050.
I-Q8Aviation ihambise unikezelo lokuqala lweNeste YAM IWatwick Airport. I-Neste ehamba phambili kwimarike yokuhamba ngeenqwelo-moya, eqinisekiswe ngokupheleleyo, iveliswa kwi-100% yenkunkuma ehlaziywayo kunye nokuzinzileyo kunye nezinto eziyintsalela, ezifana neoli yokupheka kunye nenkunkuma yezilwanyana. Ngendlela yayo ecocekileyo nangaphezulu komjikelo wobomi bayo, i-Neste MY Sustainable Aviation Fuel inokufikelela kunciphiso ukuya kuthi ga kwi-80% * yokukhutshwa kwegesi ekrwada xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwepetroli ye-jet fossil.
I-SAF eveliswe yi-Neste idityaniswe ne-Jet A-1 ipetroli kwindawo egcina izantyalantyala ze-Gatwick kwisikhululo senqwelomoya ukwenza i-drop-in ipetroli ehambelana neenjini ezikhoyo kunye nezixhobo zesikhululo seenqwelomoya, ngaphandle kokufuna utyalomali olongezelelekileyo. I-Q8Aviation ihambise amafutha kwiitanki zokugcina eziphambili kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick ukuba zinikezelwe ngeenqwelo moya ezilula nge-hydrant system.
Ukudityaniswa kweSAF kwimisebenzi kaGatwick yenqwelomoya yanamhlanje bubungqina obubalulekileyo bengcinga kwisikhululo seenqwelomoya ekubonakaliseni ukuzibophelela okuqhubekayo ekusebenzisaneni namaqabane ayo kwezokubhabha. Indawo kaGatwick ka-2019 yekhabhoni ibonise ukuba isikhululo seenqwelomoya sele sisiqingatha sendlela yokwenza imisebenzi yayo kwaye sizibophelele ekufezekiseni ukukhutshwa ngqo kweNet Zero ngowama-2040.
UJonathan Wood, usekela-Mongameli wase-Yurophu, i-Renewable Aviation eNeste uthe: “Ishishini lokubhabha ngenqwelomoya sele lithathe amanyathelo abalulekileyo ukunciphisa ifuthe kwindalo esingqongileyo. Eyona nto iphambili ekufezekiseni oku kukwaziswa ngokubanzi kwepetroli yendalo. AbakwaNeste batyale imali njengoko sithetha ukwandisa amandla emveliso yeSAF ukusuka kwiitoni eziyi-100,000 1.5 ukuya kwi-2023 yezigidi zeetoni ngonyaka ngo-8. INeste yamkela izindululo zikarhulumente zokukhuthaza ukusetyenziswa kweSAF ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi yezokundiza. Kubalulekile ukuba iinqwelo-moya ezandayo, izikhululo zeenqwelo moya kunye nabanikezeli ngezibaso bakhokelele kwindlela eya kwikamva elizinzileyo lokuhamba ngenqwelomoya. Siyavuya ukwamkela i-EasyJet, QXNUMXAviation kunye neGatwick Airport phakathi kwaba bahambele phambili. ”
U-Naser Ben Butain, uMphathi Jikelele we-Q8Aviation uthe: “Kuyasivuyisa ukudlala indima yethu ekuboneleleni nge-fuelJet yokuqala kwiGatwick. Siye sakha ubambiswano oluluqilima ne-EasyJet kwiminyaka emininzi, kwaye sixhamla kwinkxaso ebalaseleyo evela eGatwick Airport Ltd naseNeste, kwaye sijonge phambili ekusebenzeni ngokusondeleyo nawo onke amahlakani ukuqhubela phambili iinjongo zethu zozinzo. ”
UJane Ashton, UMlawuli wozinzo e elulaJet Uthe: Siyavuya ukwazisa ukuba namhlanje sisebenzisa i-SAF kubungqina beenqwelo-moya ezisuka eGatwick kwaye sizibophelele ekusebenziseni indibaniselwano yeSAF kuzo zonke iinqwelomoya ezisuka eGatwick ziye eGlasgow kuyo yonke iCOP26, ngenxa yomzamo wentsebenziswano namaqabane ethu. kule projekthi. Ukufumaneka kwe-SAF kusafuna ukukhula kodwa ziya kuba sisisombululo sexeshana esibalulekileyo kwindlela yethu yokuhamba, ngelixa sixhasa ukwenziwa kwenqwelomoya, nto leyo eya kuba sisisombululo esizinzileyo kuthungelwano olufutshane olufana nolwethu. ixesha elide. Okwangoku, sisebenza ngenqwelomoya ngendlela eyiyo kwaye kungoku kuphela kwenqwelomoya enkulu yaseYurophu ekukhutsheni ukukhutshwa kwekhabhoni kumafutha asetyenziselwa zonke iinqwelo-moya zethu, ezinempembelelo ngoku. ”
UTim Norwood, uMlawuli wemiCimbi yezoShishino, uCwangciso noZinzo kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick uthe: “Siyavuya kakhulu ukusebenza ne-EasyJet, Q8Aviation kunye neNeste ukubonisa ukusetyenziswa kweSAF kwisikhululo senqwelomoya saseGatwick. I-SAF yenye yeendlela ezininzi zokuhamba ngenqwelomoya e-UK naseGatwick ukuya kufika kwi-zero zero yekhabhoni ngo-2050, ecaleni kweekhabhoni, indawo yomoya yala maxesha kunye nokuqhubeka kwezinto ezintsha kubuchwephesha be-aerospace, kubandakanya umbane, i-hydrogen kunye neenkqubo zeenqwelomoya. Ngomgaqo-nkqubo kaRhulumente okrelekrele wokuxhasa utyalo-mali kwiindleko zokukhuphisana kwe-UK SAF, uninzi lweenqwelo moya zinokusebenzisa i-UK ivelise i-SAF phakathi ku-2020. Ukufezekisa ukukhutshwa kweNet Zero ngowama-2050 ngumceli mngeni omkhulu kunye nethuba kushishino lwethu. Umgaqo wendlela ozinzileyo we-Aviation's decarbonisation kunye neenjongo zethutyana zibeka imigqaliselo ecacileyo kwaye sikulungele ukudlala indima yethu eGatwick, ngokusebenzisa imephu yendlela yokuqala yeshumi leminyaka nangokugcina imephu yendlela ihlaziyiwe ukuze ifake izisombululo zetekhnoloji ezongezelelweyo ze-2030s.
شات بنوتة uthi:
Oktobha 29, 2021 kwi-19: 41
Wowu, linqaku elihle kakhulu. Ndiyithanda kakhulu. Ndiyathemba ukuba uya kuqhubeka namanqaku anjalo. Enkosi. Ndiyabulisa.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 29
umfanekiso weskrini للجوال شات صوتي شات عراقنا دردشة عراقية دردشة العراق